Imali - ingxaki ezininzi. Kule nto inyaniso. Kodwa kwezinye "zehlabathi eliphezulu" ingxaki enkulu apho ibeka khona imali yonke. Omnye uchitha imali eyinkunzi ukwandisa ishishini, kwaye ezinye zizungezwe i-luxury, ukubonisa abanye isimo sabo. Abantu abanjalo bakhona phakathi kwabashishini baseRashiya. Kodwa kukho nakubantu bethu abazizityebi, abo "i-enterprise" ebalulekileyo ebomini babo kubantwana. Sinika ingqalelo uluhlu lwabantu abashishini beRashiya abaninzi kakhulu.
Isekela le-Duma elineminyaka engama-46 elinomlinganiselo-mali oqikelelwayo weebhiliyoni ezine zeebhiliyoni unabantwana abasibhozo. Inkunzi yakhe yenziwa kwi-metallurgical shishini. KwiRashiya ezininzi ndikhunjulwa kukuba ngo-2007 ndathengisa izithuthi ezi-3000 kwiimali zabalandeli behlala kwiindawo zaseBelgorod, apho agijimela khona iDuma. Nangona esenqwenela ukuthetha ngobomi bakhe, uSkoch uyaziwa ukuba waqhawula umtshato. Ngaloo xesha, ummeli-shishini uthabatha inxaxheba kwimfundo yabantwana bakhe, phakathi kwabo amawele amane (inkwenkwana namantombazana amathathu) awamzalelwa ngo-1994.
I-oligarch eyaziwayo yaseRashiya neyaseBrithani inemali eninzi, naye ubaba wabantwana abathandathu. Umntwana wokugqibela wabeletha intombi yakhe kunye noDaria Zhukova ngo-2009. Abantwana bokuqala abahlanu banomtshato wesibini, ukuchithwa kwawo ngo-2007 kuthethwa ngehlabathi lonke.
Umlawuli jikelele wenkampani yotyalo-mali "Aton" unabantwana abathandathu. Impumelelo kunye nobutyebi kuhamba nobaba omkhulu. U-Yuryev unguSihlalo wombutho "uDevvaya Rossiya", kunye nomongameli wemibutho yezoqoqosho ezingezizo. Wasebenza njengomcebisi kuMongameli waseRashiya uDmitry Medvedev. Ukongeza, u-Yevgeny Yuryev ungumdala webandla. Ukuba nolwazi lwezemfundo yabantwana abathandathu, nguyena wabavelisi beprojekthi kwinkqubo karhulumente ukuxhasa iintsapho ezinkulu.
Lo mfo-shishini oneminyaka engama-44 usele waba ngupapa kathathu. Ngokufanayo. Uphindwe kabini umkhulu. Ngokutsho kwakhe, yintsapho yinto ebomi ngayo. USmakov uqokelele inkunzi yakhe kwishishini lokwakha, ekubeni ngumsunguli kunye nomnini we-Sapsan nkampani, eyenziwa ekwakheni iindawo zendawo yokuhlala. Ininzi yemali eyayifumanayo ngumfazi weshishini onothando kwiindawo ezahlukeneyo.
Igor Altushkin, obizwa ngokuba yi "Copper King" yaseRussia, kunye noSergei Shmakov, unabantwana aba-6 abasuka komtshato omnye. Ngo-42, ungumnini weRussia Copper Company, kunye neyona nkampani enkulu kakhulu eRussian Federation, i-Chelyabinsk Zinc Plant. I-Altushkin ngumsekeli we-RMK's Creative Fund, ejongene ngokunyanisekileyo kunye nezintandane ezincedisayo, abantwana abanezifo ezinzulu kunye nabantwana kwiintsapho ezihluphekileyo.
UNikolay noSergey Sarkisov
U-Nikolay oneminyaka engama-44 ubudala kunye noSergey Sarkisov oneminyaka engama-53 ubudala, bakhuphula abantwana aba-6 no-5 ngokulandelana. Abazalwana bayabanikazi be-SC "RESO-Garantiya." Abamabhizinisi bahlekisa ukuba banokuqokelela iqela labo lebhola ebantwaneni babo, amantombazana anenani elininzi lentombazana kwintsapho yabo.
Umninimzi-mveliso oneminyaka engama-57 kunye nomlawuli olawulayo weenkampani zase-Eurasia zokuloba unabantwana abathathu-abafana abathathu namantombazana amabini. Ukhokela ubomi obungewona uluntu. Kuyaziwa kuphela ukuba uqokelela iwayini, uthanda intando ye-tennis.
Umsomashishini waseRashiya onenkqubela yeJordanian ukhuthaza abantwana abahlanu. UZiyad ungumnikazi weStroygazconsulting. Uhlala kwindawo ehlala ngaselunxwemeni lwe-Istra, ehlala kwingingqi yaseMoscow, kwaye iquka indawo yehektare ezingama-16. Ukuzibandakanya ekuqokelelweni kwemisebenzi yabashushisi baseRussia nabaseDatshi.
Ibhanki yaseRoma Roman Avdeev, ngaphandle kokuhlazeka, ungabiza ubaba wencwadi encinci. Khawucinge, uvelisa abantwana abangama-23 - abantwana bakhe abane nabantwana aba-19 abamkelweyo. Ngenxa yokukhula kwentsapho yakhe ngo-2008, wafika kwisigqibo sokurhoxisa inxaxheba ekusebenzeni ebomini yaseMoscow yaseBrooklyn eyadala, eshiye isikhundla kwibhodi lolawulo. U-Avdeev wayehlala ehlala enothando kwaye wanceda izindlu zeenkedama. Kodwa ngelinye ilanga waqonda ukuba uncedo lwemali olujoliswe kwiinkedama zezintandane aziqhelanga zonke iingxaki zeenkedama, waza wagqiba ekubeni athathe abantwana bakhe kwintsapho yakhe, ngaloo ndlela enze abanye abantwana bajabule.
Umlingisi uEkaterina Kopanova
Iingcali ezidumileyo zengqondo zehlabathi
Ubomi bomntu ka Sergey Lazarev
IBurdock: iipropathi zokuphilisa ingca
Ukuhamba ngebhayisikili yokulahleka kwesisindo
Kwiblogi u-Anfisa Chekhova uxubusha ngokugqithiseleyo ukulahleka kwakhe kwehla
Ukuhlanjululwa kweentso ekhaya
Iibhonsi kunye nama-currants